Tisjiic - Wikipedia
Magaalo in BariTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Bari
Tisjiic() (), Waa Tuulo ka tirsan gobolka Bari Waxay 90 Kiilomitir u jirtaa Magaalada Boosaaso. Waxay u jirtaa laamiga qiyaastii ilaa 40 Kilomitir. Magaalada Tisjiic waxay ka kooban tahay labo qaybood oo la kala yiraahdo Tisjiic Sare iyo Tisjiic Hoose. Labada qaybdood ee Magaalada ayaa isu jira qiyaastii ilaa 3 kilomitir.
Waxbarasho[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Tisjiic waxaa ku yaaala labo iskuul Hoose Dhexe iyo Dugsiyo Quraanka Kariimka ah lagu barto. Sanadii 2019 ayaa Ardayda Fasalka 8-aad u fariisteen Imtixaanka Shahaadiga (Centerlized Exam) ee Wasaarada Waxbarashada Puntland qaado. Tisjiic waxay leedahay hanaan waxbarasho oo koroya arintaas oo ay udub-dhexaad u yihiin bulshada deegaanka ee waalidiinta iyo waxgaradku ugu horeeyaan.
Deegankan waxaa la asaasay 1920. Wuxuu horaantii ahaa ceel ma'awi ah oo laga cabo gu'u iyo jiilaalba. Sanadkii 1920 ayaa markii ugu horeysay la deegaameeyay. Tisjiic waa magaalo ballaaran hada bulsho ahaana koreysa. Deegaanka waxaa degan Beesha Dishiishe ee ka mid ka ah beelaha Daaroodka.
Tisjiic, Gobolka Bari
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tisjiic&oldid=202948"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Luuliyo 2020, marka ee eheed 21:42.